conveyor ဂီယာအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, helical ဂီယာအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
conveyor ဂီယာအုံနှင့် helical ဂီယာအုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ဂီယာအုံအသစ်တစ်ခုကို 400 နာရီသို့မဟုတ်3လများအကြောင်းအသုံးပြုပြီးနောက်ချောဆီကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးနောက်, ဆီပြောင်းလဲနေတဲ့သံသရာတိုင်း 4000 နာရီအကြောင်းကိုဖြစ်၏ ကွဲပြားခြားနားသောချောဆီကိုအမှတ်တံဆိပ်ရောနှောသုံးပါ။ ၎င်းသည်ဂီယာအုံအတွင်းရှိချောဆီကိုလုံလောက်စွာထားရှိပြီးပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ ချောဆီအရည်ယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်းသို့မဟုတ်ပမာဏလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိပါကချောဆီကိုပြောင်းလဲသင့်သည်သို့မဟုတ်အချိန်ဖြည့်သင့်သည်။
ဂီယာအုံပြတ်တောက်သောအခါအစိတ်အပိုင်းများကိုအရင်မဖြုတ်ပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဌာနရှိအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို ဆက်သွယ်၍ ဂီယာအုံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကဲ့သို့တံဆိပ်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကိုပေးပါ။ အသုံးပြုသောအချိန်၊ အမှားအမျိုးအစားအပြင်ပြonesနာများ၏အရေအတွက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်လျော်သောအရေးယူပါ။
က) မိုး၊ ဆီးနှင်း၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်သက်ရောက်မှုများမှကာကွယ်သည်။
)) ဂီယာအုံကို ၂ နှစ် (သို့) နှစ်အတန်ကြာသိမ်းဆည်းထားပါကသန့်ရှင်းမှုနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများကိုစစ်ဆေးပြီးပုံမှန်စစ်ဆေးမှုပြုနေစဉ်တွင်သံချေးမတက်နိုင်သည့်အလွှာရှိနေသေးသလား။
ဒါဟာစနစ်တကျဂီယာအကြားမညီမညာဖြစ်နေသောကွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ် bearing ကိုပျက်စီးခဲ့သည်။ ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်သည်ချောဆီကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဝက်ဝံများကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထပ်မံအကြံပေးမှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းသင်မေးမြန်းနိုင်သည်။
ရေနံယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဂီယာအုံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သော့ခလောက်များကိုတင်းကျပ်။ ယူနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ရေနံယိုစိမ့်နေသေးလျှင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဌာနရှိကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီယာအုံများသည်အထည်အလိပ်၊ အစားအစာပြုပြင်ခြင်း၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်လှေကား၊ အလိုအလျောက်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊
သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း Warrenty ကာလကဘာလဲ?
သင်္ဘောထွက်ခွာသွားသည့် နေ့မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံမှထွက်ခွာချိန် မှစ၍ တစ်နှစ်အာမခံချက်ပေးပါသည်။
မဆိုမေးခွန်း? ကြှနျုပျတို့နောကျလိုကျပါ !
စက်မှု variable ကိုမြန်နှုန်း drive ကို
Helical ဂီယာ၊ Worm ဂီယာ၊ ဂြိုလ်ဂီယာ၊ ဂြိုလ်ဂီယာ၊ စက်ဘီးဂီယာ၊ Spiral Bevel Gear Motor, Worm Gear Motors, Cycloidal Gear Motor
Helical ဂီယာ၊ Spiral bevel ဂီယာ၊ Bevel ဂီယာ
Sumitomo အမျိုးအစား cyclo
Skew Bevel ဂီယာ Box ကို
လိမ် bevel ဂီယာ, Bevel ဂီယာ